RASMI: Jack Grealish Oo Afka Furtay Iyo Wararkii Ku Xidhiidhinayey Man United Oo Uu Ka Hadlay - Gool24.Net
RASMI: Jack Grealish Oo Afka Furtay Iyo Wararkii Ku Xidhiidhinayey Man United Oo Uu Ka Hadlay
Kabtanka Aston Villa ee Jack Grealish ayaa si buuxda u qiray in aanu hubin mustaqbalkiisa iyo halka uu ka ciyaari doono fasal ciyaareedka soo socda, xilli ay sii kordhayaan wararka ku xidhiidhinaya Manchester United.
Villa ayaa xalay soo noolaysay rajadeeda horyaalka Premier League kaddib markii ay 1-0 kaga badisay Arsenal oo ay ku qaabishay Villa Park, waxaanay guushaas kaga soo baxeen khadka cas ee dib loogu noqonayo heerka labaad, laakiin waxay u baahan yihiin in ciyaarta soo socota ay badiyaan ama Watford oo ay isku dhibco yihiin oo ay xalay ka sare mareen laga badiyo.
Grealish oo ay da’diisu tahay 24 jir, kana mid ah ciyaartoyda diiradda Manchester United ay hayso, ayaa warbaahinta la hadlay kaddib guushii kooxdiisa ee xalay, waxaana wax laga weydiiyey mustaqbalkiisa.
Laacibkan ayaa caddeeyey in kaliya uu hadda ka fikirayo sidii uu Aston Villa uga badbaadin lahaa inay horyaalka heerka labaad u dhacdo, balse uu go’aanka mustaqbalkiisa gaadhi doono marka uu xili ciyaareedku soo dhamaado.
Kabtan Grealish oo si toos ah loo weydiiyey haddii uu xili ciyaareedka dambe sii xidhnaan doono shaadhka Aston Villa ayaa ku jawaabay: “Ma hubo waqtigan. Kaliya hal ujeeddo ayaan leehay, waana inaan kooxdan ku ilaaliyo Premier League, waxaanan rajaynayaa inaanu Axadda samayn doono.”
Aston Villa waxay Axadda u tegi doontaa West Ham oo iyaduna dhibaato ku jirto, waxaana natiijada ciyaartaasi ay horseedi kartaa in Villa ay ka badbaado inay Championship ka ciyaarto fasal ciyaareedka dambe.
Waxay hadda Aston Villa farqiga goolasha kaga sare martay Watford oo Manchester City ay ka dhalisay 4, balse kulanka ugu dambeeya ayay labada kooxood ugu dagaallami doonaan midkooda soo gudbi doona.